China iHDPE umbhobho igesi mveliso kunye nabenzi | Shengyang
Umbhobho wegesi iHDPE uqinile kwaye ukhuselekile, ubukhulu becala usetyenziswa kubunjineli begesi ezidolophini.
Ukusetyenziswa okukhuselekileyo ngaphezulu kweminyaka engama-50.
Umbhobho we-PE unobude kwikhefu elingaphezulu kwe-500%. Ayizukuqhekeka phantsi kweenguqu ezahlukeneyo zommandla onje ngenkxaso yomhlaba kunye nenyikima, kwaye inokhuseleko oluphezulu. Ukugoba irediyasi (R≥15D), akukho mfuneko yamalungu engqinamba, ekulungeleyo ukwakhiwa.
◎ Cold ukumelana
Umlinganiso wolwandiso lolungelelwaniso lombhobho we-PE yi-1.5X10-4mm / mm ° C, kwaye ubude bayo phantse abuchaphazeleki lutshintsho lobushushu. Akukho lutshintsho lwenzeka emzimbeni nakwi -80 ° C. Ilungele ngokukodwa imimandla ebanda kakhulu.
Umbhobho we-PE ungasetyenziselwa ukudibanisa umbane okanye unxibelelwano olushushu. Unxibelelwano lwayo lugqityiwe, luqinile kwaye alusoze luvuze.
Gxila kwihydrochloric acid kubushushu begumbi. Kwi-asidi ye-sulfuric acid (≤70%), i-nitric acid (≤25%), i-phosphoric acid, i-hydrofluoric acid, i-asidi enzima (≤10%) kunye nezinye izisombululo, imibhobho ye-PE ayichaphazeleki.
◎ Ialkali kunye neetyuwa ezingaphiliyo
Umbhobho we-PE ubhaptizwa kwi-lye eyahlukeneyo, ityuwa engaphiliyo kunye namanzi olwandle kwi-60 ℃, umbhobho we-PE awuyi konakalisa.
Matter Umcimbi wezinto eziphilayo
Umbhobho we-PE unokumelana nokunyibilikiswa kwezinto ezifana ne-hydrogen peroxide kunye ne-methyl petroli kubushushu obuqhelekileyo, kwaye umbhobho we-PE awuyi kubola.
Umbhobho we-PE bubunzima bokukhanya (yi-1/7 kuphela yombhobho wentsimbi) kwaye unokuguquguquka okuhle. Umbhobho we-De16-De75 unokuba nenxeba ngokuhamba ngokulula kunye nolwakhiwo.
Hdpe Electro Fusion Gas Lokulinganisa Pe Pipe Lokulinganisa
Umbhobho wegesi we-Hdpe i-Hdpe Tubing
Umbhobho wepayipi ye-Hdpe
Umbhobho wehdpe wokubonelela ngegesi
Imibhobho Hdpe Kuba Gas
Ubushushu-enganyangekiyo polyethylene umbhobho edityanisiweyo ...